नेपाल आज | कसरी हुन्छ डिप्रेसन ?, यसका लक्षण र राेकथामका उपाय
कसरी हुन्छ डिप्रेसन ?, यसका लक्षण र राेकथामका उपाय
शनिबार, २९ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज (RP)
काठमाडौ । विभिन्न समयमा हामी डिप्रेसनको शिकार हुनसक्छौँ । डिप्रेसनले मानिसको उत्साहलाई शून्य बनाइदिन्छ । डिप्रेसनको कारण कतिपय मानिसहरूले आत्महत्याको प्रयासपनि गर्ने गरेकापनि छन् । मानिसभित्र डर र चिन्ताहरू पैदा गराउने, मनलाई एकोहोरो बनाउने, एक्लोपनातिर डोहो¥याउने जस्ता डिप्रेसनका असर हुन् ।
डिप्रेसन एक किसिमको मानसिक रोग हो । उदास हुनु, डर लागिरहनु, आत्मग्लानीले घेरिनु, एकोहोरो हुनु जस्ता लक्षण डिप्रेसनका संकेत हुन् । डिप्रेसन भनेको उदासीको अवस्था नै हो। यसकारण मानिस हरबखत उदास हुनुपनि मानसिक रोग हुन सक्छ । मन भारी हुने, कुनै उमङ्ग नरहने, हीनताबोधले गाँज्ने जस्ता उदासीका संकेत दुई हप्ताभन्दा बढी समयसम्म कायम रहे त्यो डिप्रेसनको अवस्था हुन सक्छ ।
डिप्रेसन जुनसुकै उमेर वा लिङ्गका मानिसलाई हुन सक्छ । १० जनामध्ये एक जनालाई डिप्रेसन हुने गरेको विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्। तसर्थ डिप्रेसनको समस्या विश्वव्यापी रुपमा चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । डिप्रेसनको उपचार हुन्छ। तर, यो अवस्थालाई बेलैमा पहिचान गरेर उपचारतर्फ लाग्नुपर्छ । डिप्रेसनका लक्षण, उपचार र रोकथामका उपाय निम्नानुसार छन् :
७. हरबखत थकान महसुस हुने,
१२. खुसी हुन नसक्नु र कुनै कुराले मनमा उमंग नजाग्नु
२. परामर्श र थेरापी
३.कग्निटिभ विहेभियर थेरापी (सिबिटी)
५.इलेक्ट्रो कन्भल्सिङ थेरापी (विद्युतीय झट्काको प्रयोग)
डिप्रेसनको बिरामी औषधि र परामर्शले समेत नछुने अवस्थामा पुगिसकेको छ भने विद्युतीय झड्का अर्थात् इलेक्ट्रो कन्भल्सिङ थेरापी ९इसिटी० को प्रयोग गरिन्छ । इसिटीलाई अन्तिम उपायका रुपमा लिइन्छ। बिरामी गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छ भने मस्तिष्कमा विद्युतीय झड्का दिने गरिन्छ ।
– योगरध्यान गर्ने,
यस्ता छन् आलु खानुका फाइदा
भारतमा प्रतिबन्धित माछा नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती